Flash gubi: Sida loo Beddelaan Flash in DVD
> Resource > DVD > Sida loo Beddelaan Flash FLV Videos in DVDs
Ma badan oo Flash FLV videos soo bixi websites oo aad rabto inaad badalo Flash in DVD Raaxo shaashadda weyn? Ka fiirso halkan sameeyo. Waxaad baran kartaa sida loo badalo Flash videos in DVD cajalladaha in this article. Halkan, waxaa lagu siin doonaa la Flash gubi ah xirfad iyo Hanuun faahfaahsan. Waxaa magaceeda la Wondershare DVD abuuraha ( DVD Creator for Mac ). By isticmaalayn Flash smart in DVD Converter oo soo socda hagitaan talaabo talaabo tan, waxaad samayn kartaa DVD disc a professional-ka raadinaya Flash videos in daqiiqo.
Fiiro gaar ah: App Tani kaliya taageeraa Flash qaab FLV, ma Flash Jabbuuti.
1 dejinta aad Flash FLV videos to this Flash weyn oo ay ku DVD gubi
Si aad ku shuban xaafaddaada Flash video files, waxaa jira saddex siyaabood oo aad u isticmaali karto:
Tag geeska top-bidix ee suuqa, waxa aad ku dhuftay karaa badhanka buluug ah ku wareegsanaa, ka dibna waxaa uu yahay "dar Files ..." doorasho waxaad dooran kartaa. Hadda, waxaad leedahay fursad ay ku dhirtuba your computer iyo dajiyaan files Flash aad.
By garaacid "+ Import" badhanka in this app ee Murayaad bidix, waxa kale oo aad heli doontaa fursad ay ku dhirtuba ku faylasha kombiyuutarada iyo dejinta.
Raadi faylasha Flash bartilmaameed aad kombuutarka, ka dibna si toos ah kuwaa oo in this app ee Murayaad bidix.
Fiiro Gaar ah: isku xigxiga video ee ay leeg- bidix ka dhigan tahay si play ah. Fadlan hubi inay sax tahay sameeyaan. Haddii aad rabto in aad beddesho xigxiga video ah, shaqo waxaad u samayn kartaa garaacida ah "↑" ama "↓" ikhtiyaarka ugu hooseysa. Haddii u baahan, waxaad sidoo kale riixi kartaa "dar horyaalka" button in lagu daro horyaalka.
Talooyin: (Ikhtiyaar) Haddii uu jiro qaar ka mid ah clip in aadan rabin, aad u jari karaa in this video app ee suuqa kala sixiddiisa. Oo weliba, aad noola, isku shaandheyn, ku dar watermark iyo Cinwaan halkan. Si aad u yeeshaan, riix doorasho Edit sudhaan video item aad rabto in aad ka.
Shakhsiyeeyo DVD kuu gaar ah menu ay ku daray qaar ka mid ah xubno ka qabow ee template DVD menu aad dooratay, waxaad tidhaahdaan, thumbnail, music soo jeeda, qoraal, sawir, iwm Si aad u dooratid aad jeceshahay template DVD menu, aad riix tab Menu ugu sarreeya ee daaqadan in ay galaan ay maktabadda galay. Ogow in haddii aad hoos ku dhuftay cagaaran button arrow ag, waxaad booqan doona maktabadda khayraadkeenna online, halkaas oo aad kala dooran kartaa in ka badan arrimo menu DVD .
3 Guba Flash in DVD
Ka dib marka aad ku eegaan mashruuca oo dhan oo waa raalli saamayn ugu dambeeya, kaliya aad ku dhacay tab "Guba". Wakhtigan, geliso DVD5 maran ama disc DVD9, ka dibna sax "Guba si disc" fursad u furmo suuqa gubanaya. Ugu dambeyntii, riix "Guba" badhanka si loogu badalo Flash in DVD. Marka sameeyay, kaliya tuurid this Writen disc DVD ah loo isticmaali.
Fiiro Gaar ah: Tani Flash in DVD gubi uu awood u leeyahay in cadaadin mashruuca oo dhan si toos ah markii size mashruuca DVD oo dhan waa in ka badan awoodda DVD kaydinta.